Posted by ညီလင်းသစ် au 23.9.08
ဒီတခါတော့ ကိုညီလင်းသစ်က အကြံဦးတယ်ဗျာ။ ကျနော်လဲ ပို့စ်ရေးဖို့ဆိုပြီး ပန်းပုံတွေ ရိုက်ထားတာ ရှိတယ်။ မတင်ဖြစ်သေးဘူး။ :)
ဒါနဲ့ ကွန်မန့်နေရာမှာ အင်္ဂလိပ်လို မဟုတ်ဘဲ တခြား ဘာသာတခုခု ဖြစ်နေတယ်။ အဲလို တမင်ထားထားတာလား။
can not write in c box.
နန္ဒာလဲ ပန်းလေးတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ ကြိုက်တယ်။
ကိုစေးထူးလိုပဲ ရိုက်ပြီ်း မတင်ဖြစ်သေးဘူး။
ပန်းဆိုတာ လောကကြီး လှစေဖို့ အလှဆင်ရာမှာ မပါမဖြစ်ပေါ့။ နန္ဒာတော့ ပန်းတွေကို ချစ်တယ်။
ဒီဓါတ်ပုံထဲက ပန်းကလေးတွေက Summer မှ ပွင့်ကြတာနော်။ England မှာလဲရှိတယ်။
By the way I cannot write in CBox either!! Please check.
ပန်းလေးတွေကြည့်သွားပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်။ country ရှုခင်းလေးတွေလိုပဲ။ ကျွန်မ မ
ကြာမကြာအိပ်မက်လေ့ရှိတဲ့ ဥရောပရဲ့ ကျေးလက်ဒေသက ပန်းလေးတွေထင်ရဲ့။
lကိုကလိုစေးထူးနဲ့ ကျနော်နဲ့ကတော့ ဟိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရိုး စကားလေးလို ဖြစ်နေပြီ ထင်တယ်၊ Great minds think alike ဆိုတာလေ...၊ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေဟာ အတွေးအခေါ် တူကြတယ် လို့များ ဘာသာပြန်ရမလား မသိ..၊ ကိုကလိုစေးထူးက ပုံတွေမတင်ဖြစ်သေးပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ၊ အကြံတူ နောက်လူသာစမြဲ ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာစကားပုံလေးလဲ ရှိသားပဲး))
ကွန်မန့်က ပြင်သစ်ဘာသာ ဖြစ်နေတာဗျ၊ ကျနော် ဘလော့ဂ်စ လုပ်ကတည်းက ပြင်သစ်စကားကိုရွေး လိုက်မိတော့ တောက်လျှောက်အဲဒီလို ဖြစ်နေတာပါဗျာ၊
အစ်မခင်ဦးမေ...လာလည်တာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ၊ C-box လည်းပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ...။
နန္ဒာ့ဆီက ပန်းလေးတွေလည်း တင်ပါဦး၊ ကြည့်ကြရ တာပေါ့၊ ပန်းဆိုတာ ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဝေ လည်းမွှေး၊ ကြွေလည်းမွှေးပါပဲ...၊
ဟုတ်ပါတယ် မယုဝရီရေ...၊ အဲဒီပန်းလေးတွေက အဲ့လ်ပ်စ် တောင်တန်းပေါ်က ပန်းတွေပါ။ မယုဝရီရဲ့ အိပ်မက်ထဲက အရောင်အသွေးကို မှီမှ မှီပါ့မလားပဲ...။
အကိုညီလင်းသစ် .. ပန်းပုံလေးတွေက သိပ်လှတာပဲ။ ရိုးရိုးလေးတွေနဲ့ မြင်ရတာ စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးလှပသွားတယ်။ ညီမက သဘာဝအတိုင်း လှနေတဲ့ ပန်းခင်းတွေ ၊ အလှစိုက်ထားတဲ့ ပန်းတွေကို သိပ်ချစ်သလို မြင်ရတာလှစေတဲ့ ဘယ်ပန်းမဆို အကုန်လုံးကို သိပ်ကြိုက်။ ခံစားလှပစေသော ပန်းပုံလေးတွေအတွက် ကျေးဇူး :)
လောကကိုအလှဆင်ကြသော မိန်းမပျိုလေးတွေနဲ့တူတယ်း)
အဟဲ..ညီက တယ်ကဗျာဆန်နေပါလား...။း)
အဲ့ ပန်းကလေးတွေ တည်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေကလည်း သဘောကျစရာ ကောင်းလှတယ်။
ညီမက ပန်းကလေးတွေဆိုရင် သဘောတကျ ထိုင်ပဲကြည့်နေချင်တယ်။
အဲဒါ ပန်းချစ်သူလား၊ မချစ်သူလား ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမည်မပြုတတ်ဘူး :)
ဒါဆိုရင် ကျနော် အမည်ပြုပေးလိုက်မယ်...၊